headives Archives - SmartMe
Archives tag: headphone
Dom » Entina notsongaina miaraka amin'ny "headphone"
Ny AirPod an'ny taranaka fahatelo sandoka dia efa misy eny an-tsena
airpods, 3 AirPods, paoma, écouteur
Ny tsaho AirPods an'ny taranaka fahatelo dia efa nisy hatry ny ela. Betsaka ny famantarana fa hanomboka amin'ny tsena izy ireo amin'ny telovolana fahatelo amin'ity taona ity. Misy AirPod sandoka an'ny fahatelo ...
Samsung dia manolotra headphones vaovao miaraka amin'i Adidas
Adidas, fizarana voalohany, Samsung, écouteur
Ny finday tsy misy tariby Samsung Galaxy Buds Pro dia misy amin'ny loko telo hatreto. Noho ny fiaraha-miasa amin'i Adidas dia hiova izany ary hanangana karazana fotsy vaovao sy vaovao an'ny orinasa miaraka amin'ny ...
Eo amin'ny tsena tototry ny GRP dia tsy hita ity mpilalao ity!
Marshall, écouteur, tws
Tondraky ny headphone tsy misy tariby ny tsena. Na ny mpilalao toa an-dRazer aza niditra tao. Tsy hita nandritra ny fotoana ela ilay mpamokatra feo malaza, Marshall. Hatramin'izao ... Izaho dia tompon'ny maodely Marshall Major an-tsokosoko izay ...
Sony dia hanolotra ny mpandimby ny headphones WF-1000XM3
Roa taona aorian'ny premiere an'ny headphones WF-100XM3, Sony dia hanolotra ny mpandimby ny headphones malaza azy. Sony dia manolotra ny mpandimby ny maodely WF-1000XM3 WF-1000XM3 satria modely roa taona dia manomboka mihantitra kely, ka dia nieritreritra haingana ilay orinasa ny hanolotra ny mpandimby an'ity ...
AirPods Pro. Famerenana ny pro headphones avy amin'ny Apple
4 Febroary 2021
airpods, airpods pro, paoma, écouteur, tws
Marina fa ny olona rehetra dia efa miresaka momba ny AirPods Pro 2, izay havoakan'i Apple tsy ho ela, fa ny AirTags koa dia tokony ho premiere herintaona lasa izay, ka nanapa-kevitra ny hamoaka ny famerenako ireo headphone AirPods Pro aho. Tsy nikasa ny hividy azy ireo aho, ...
Tronsmart dia manolotra fitaovana vaovao 3 amin'ny tsena
Efa ho iray volana izay no nanomboka ny fiandohan'ny taona vaovao. Ny fanapahan-kevitry ny taom-baovao dia tokony eo am-panatanterahana efa ela, sa tsy izany? Ary manao ahoana ianao? Eny ary, mety mila karazana antony manentanana ianao? Manana anao izahay anio ...
TWS Earphones - 20 Decebel AHS75-ANC
20 decebel, ahs75-anc, écouteur, tws
Vao tsy ela akory izay dia nisy lohan-tsofina 20 Decebel AHS75-ANC nianjera teny an-tanako (na angamba sofiko). Ny tsena dia feno vahaolana teknolojika maro, ary ny mpanamboatra dia mifanalavitra amin'ny fanaovana headphone. Vao tsy ela akory izay, TWSy (True Wireless Sound) miditra ...
Razer Hammerhead TWS - fitsapana ny mpilalao Alahady
7 Janoary 2021
razer, Razer hammerhead, écouteur
Amin'ny maha mpampiasa ahy ultrabook miaraka amina sary Intel, tsy lavitra ny mandray anjara amin'ny hazakazaka tompoko PC aho. Na izany aza, efa nitady vokatra Razer foana aho. Tsy haiko raha ny jiro "Chroma", ny kalitaon'ny fitaovana na ...
Ny headphones avy ao amin'ny Tronsmart Onyx ve no finday tsara indrindra?
muzyka, écouteur, headphone tsy misy tariby, earphones
Ary nitranga izany. Nijanona ny famerenako ny headphones avy any Haylou (azonao vakiana eto). Nisy olona tao amin'ny biraon'ny famoahana (arahaba an'i Ariel) nilaza fa handinika ny vokatra rehetra amin'ity tontolon'ny haitao sy mozika ity aho. Ary toy izany koa tamin'ny ...
Haylou? Maheno ahy ve ianao? Haylou GT2S finday tsy misy tariby
4 Desambra 2020
haylou, écouteur, headphone tsy misy tariby, earphones
Tany am-piandohana, alohan'ny hanombohako handatsaka ny eritreritro amin'ny headphone Haylou GT2S eo amin'ny efijery monitor, tsy maintsy mahafantatra zavatra iray momba ahy ianao. Tsy audiophile goavambe afaka mandre ny feo rehetra (na tsy misy feo) aho. Manaraka ...